Rasaasa News – Desalegn: Ciidamadeenu kama baxayaan Somalia illaa Al-shabaab la tir tiro
on May 28, 2014 2:37 pm
Arbaco, May 28, 2014 — Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay joogayaan Soomaaliya inta Al-shabaab laga baabi’inayo, isagoo xusay in ka mid noqoshadooda AMISOM ay ku timid codsi kaga yimid dowladda federaalka Soomaaliya.
Desalegn oo wareysi gaar ah siinayay wareys ka soo baxa daka Itoobiya ayaa sheegay in ciidamadooda ay howlo wanaagsan ka qabteen Soomaliya tan iyo markii ay ku biireen xoogagga AMISOM.
“Ciidamadeenu inay ka mid noqdaan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM waa codsi nooga yimid dowladda Soomaaliya, si aan uga taageerno dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-shabaab,” ayuu yiri Desalegn oo ka jawaabayay su’aal ahayd sababta ay AMSIOM ugu biireen maadama ay horay u sheegeen inay u qorsheynayn inay ka mid noqdaan AMISOM.
Sidoo kale, ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa la weydiiyay xilliga ay Somalia kala baxayaan ciidamadooda, isagoo ku jawaabay inaysan kala baxayn inta Al-shabaab laga baabi’inayo, gobolkuna uu ka noqonayo nabad.
“Innagu waxaan sugaynaa inta Al-shabaab la wiiqayo… heshiiska aan kaga mid noqonay AMISOM wuxuu ku saabsan yahay in Al-shabaab la tir-tiro, markaas ayaana laga yaabaa inaan soo af-jarno howlgalkeenna Soomaaliya,” ayuu ku yiri wareysiga ra’iisul wasaaraha Itoobiya.
Hailemariam Desalegn ayaa intaas ku daray in go’aankooda iyo siyaasaddoodu ay tahay inaysan ciidamadooda kala bixin Soomaaliya si kasta oo ay tahay inta Al-shabaab ay weli awood u leedahay inay weerarro geysato.
Ciidamada dalka Itoobiya ayaa waxay sannadkan horraatiisa ku dhawaaqeen inay ka mid noqdeen howgalka Midowga Afrika ee AMISOM, kaddib laba sano oo ay uga howl-galayeen Soomaaliya iyagoo madax-bannaan.
Arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo dhawaan uu madaxweyne, Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in ciidamada Itoobiya uu howlgalkoodu ka badan duwan kuwa kale ee AMISOM, ayna dalka joogayaan muddo kooban.
Xasan Sheekh ayaa sidoo kale xusay in marka uu howlgalku dhammaado ay kala bixi doonto Itoobiya ciidamadooda gudaha Soomaaliya, iyadoo hadalka Desaleng uu si weyn kaga duwan yahay hadalka madaxweynaha Soomaaliya.